Agaarfa (aanaa) - Wikipedia
Agaarfaan aanaalee Oromiyaa 180 keesaa tkko yoo taatu godina Baalee keessatti argamti. Magaalaan aanaa kanaa Agaarfaa jedhamti. Kibbaan Sinaanaa fi Diinshoo, dhihaan Adaabbaa, kaabaa laga Shabalee (Shabelle River)kan Arsii irraa addaan baasu, bahaan Gasharaa fi Gololchaan daangeffamtee jirti. Magaalaan biraa aanaa kanaa Alii jedhamti.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Agaarfa_(aanaa)&oldid=26065" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 6 Fulbaana 2014, sa'aa 12:37 irratti.